Amaphutha kaKhune alimaza iqembu | Scrolla Izindaba
Amaphutha kaKhune alimaza iqembu
Amaphutha ka-Itumeleng Khune ayaqhubeka nokulimaza iKaizer Chiefs kowe-DStv Premiership kule sizini.
UKhune, obencanyelwa nguGavin Hunt kunoDaniel Akpeyi, ube nolunye usuku olwesabekayo ehhovisi ngesikhathi iChiefs ebidlala namadodoa ayishumi ihlulwa ngamabili kwelilodwa ekhaya ngesikhathi ibhekene naMaZulu ngoLwesithathu ntambama.
Lo nozinti oneminyaka engama-33 unikeze Usuthu igoli lokunqoba kusasele imizuzu emine nje ngaphambi kokukhala kwempempe yokugcina. AmaZulu asebenzise ithuba elivele ngesikhathi uLehlohonolo Majoro enezele ephutheni elenziwe nguKhune, ezama ukuphebeza ibhola kanti ulubuyisa kuKhune ogcine elifake phakathi enethini.
Ngaphambi komdlalo wangoLwesithathu uKhune ubengekho emidlalweni yeqembu kusukela ngoZibandlela.
Ngaphambi kokuthola ithuba lokubuyela enkundleni ngoLwesithathu uphuthwe yimidlalo eyi-10 kuyo yonke imiqhudelwano. Ngemuva kwamaphutha awenze ngesikhathi bedlala noSuthu, akekho ozosola uHunt ngokuphinda amhlalise ebhentshini.
UKhune, kodwa-ke, akusiyena yedwa owenze amaphutha emdlalweni wokuqala waMaZulu ngesikhathi sekhefu. U-Augustine Mulenga ubeke Usuthu phambili ngomzuzu wama-46 kwathi ngomzuzu wam-67 uLeonardo Castro washaya iphenalthi.
IChiefs iphinde yehliswa yaba namadoda ayi-10 ngesikhathi uDarrel Matsheke ekhishwa ngekhadi elibomvu. Lo bekungumdlali wesibili weChiefs emidlalweni emibili elandelanayo ukukhishwa ngekhadi elibomvu ngemuva kokuthi uSiphosakhe Ntiya-Ntiya naye athole ikhadi elibomvu bebhekene neRichards Bay ku-Nedbank Cup.
Lokhu kube ukuhlulwa kweChiefs kathathu kulandelana ngemuva kweOrlando Pirates, iBay manje AmaZulu. Usuthu lunyukele endaweni yesithupha kwathi iChiefs yahlala endaweni yesishiyagalolunye.
Khonamanjalo iSundowns bekungadingeki ukuthi ijuluke kakhulu ekunqobeni kwayo ekhaya ngamabili eqandeni ngesikhathi ibhekene neBaroka FC. UGaston Serino unikeze iSundowns ithuba lokuhola phambili ngomzuzu wama-64.
Ngemuva kwemizuzu emine uPeter Shalulile ushintshe umdlalo ngokungangabazeki. ISundowns njengamanje ihola ngamaphuzu amahlanu ilandelwa iSuperSport United esendaweni yesibili ngemuva kwemidlalo eyi-16.
ISundowns iphinde yaba yiqembu lokuqala ukunqoba imidlalo eyishumi yeligi kule sizini.